Xildhibaan Jeesow “Waligeey xiriir gaar ah lama yeelan Xukuumadda” – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesow “Waligeey xiriir gaar ah lama yeelan Xukuumadda”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal heyn maalmihii ugu dambeeyay ka taagneed Warbaahinta iyo baraha ay bulshada kuwada xiriirto ee Internet-ka, kaas oo ahaa in uu ku biiray Xildhibaanada mucaaradka ku ah Xukuumadda Raysal Wasaare Xasan Cali Kheyrre, oo markii hore saaxiib dhow lahaa.
Xildhibaan Jeesow ayaa Kalfadhi u sheegay in uusan marna saaxiib gaar ah iyo mid dhowba la noqon Xukuumadda Soomaaliya balse uu saaxiib la yahay dowladnimada iyo qof kasta oo dan guud ka shaqeysa sida uu hadalka u dhigay.
“Waan arkayay in Warbaahinta iyo dadweynahaba dhahayeen Xildhibaan Jeesow waxa uu ka soo horjeestay Xukuumadii uu taageri jiray balse waa waxba kama jiraan” ayuu ku yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Wareysi uu siiyay Kalfadhi.
“Aniga waligeey saaxiib dhow lama noqon Xukuumadda balse waxaan saaxiib la ahay dowladnimada iyo ka shaqaynta danta guud” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kamid ahaa dhowr Xildhibaan oo Xukuumadda ku eedeeyay in ay baajisay kulamadii ugu dambeeyay ee Golaha Shacabka, waxa uuna ku hanjabay in uu mooshin ka keeni doono Xukuumadda Kheyrre.
“Mooshinka ma ahan oo kaliya mid wax lagu dumiyo ee waa soo jeedin, waana qasab in aan Xukuumadda wax ka weydiino amaanka, waxa dhacayo kama aamusi karno” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Dhinaca kale Daahir Amiin Jeesow waxa uu sheegay in Al-shabaab ay badaleen qidadooda dagaalka loona baahan yahay in laga feejignaado maadaama ay kordhayn weerarada ay ka fuliyeen Soomaaliya.
“Al-shabaab waxay bilaabayn in ay qarxiyaan maqaayada, goobaha dalxiiska iyo meel kasta oo ay joogaan dad badan, halka markii hore ay raadsan jireen shaqaalaha dowladda iyo Ciidamada” ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Sharmaarke Garaad oo eedda kooram la’aanta fadhiyada golaha ka weeciyay xildhibaanada ku jira xukuumadda
Baarlamanka Puntland oo ku goodiyay in ay tallaabo ka qaadayaan hay’adaha dowladda ee aan la shaqayn guddiyada